नयाँ वर्षको वैशाख १ गतेका दिन घरमा गर्नुहोस् यी परिवर्तन, वर्षभरि नै हुनेछ लक्ष्मीको बास ! – Khabar Art Nepal
नयाँ वर्षको वैशाख १ गतेका दिन घरमा गर्नुहोस् यी परिवर्तन, वर्षभरि नै हुनेछ लक्ष्मीको बास !
By खबर आर्ट नेपाल	 On २८ चैत्र २०७५, बिहीबार ०८:५०
नयाँ वर्षमा नयाँ केहि होस् भन्ने चाहानुहुन्छ भने वैशाख १ गतेबाट नयाँ वर्ष विक्रम संवत २०७६ को आरम्भ हुँदैछ । सबैले आफ्नो घर सफा होस्, सजिएको होस्, बलियो होस्, खुसी छाओस, परिवारमा सबैको राम्रो सम्बन्ध होस्, भविष्यमा सकारात्मक योजना बनोस, उत्साह होस् भन्ने कल्पना हामी सबैको हुन्छ ।
सेक्स गरेका र नगरेका महिला कसरी छुट्याउने ?